ချစ်လှစွာသော မြန်မာပြည်မှ ဖောက်သည်တော်များ ခင်ဗျား!
FBSမြန်မာ၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို ယခင်ပုံမှန်အတိုင်းပင် ဆက်လက်ဝန်ဆောင်မှုပေးမြဲပေးလျှက်ရှိကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်. ငွေသွင်းငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ၂၄/၅ တနင်္လာမှ သောကြာအထိ ၂၄နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပြီး မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှ မြန်မာဘာသာစကားနှင့်ပင် နွေးထွေးစွာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်.
FBSသက်တမ်းသည် ၉နှစ်ခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း၁၂၀ရှိ ဖောက်သည်ပေါင်း ၄သန်းခွဲမှ သူတို့၏ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
FBS၏ နယ်ပယ်သည် ကမ္ဘာအနှံ့တွင် အဆက်မပြတ် ကျယ်ပြန့်လာနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်းထိုနယ်ပယ်များထဲမှ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်မှာ အားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါသည်. ယနေ့အချိန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Forexထရိတ်ဒင်းနှင့်ပက်သက်သည့် ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းထားမှုမရှိသေးပါ. အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာဥပဒေများ ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းလာခဲ့ပါက ထိုပြဋ္ဌာန်းလာသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပြည့်စုံစေပြီး တရားဝင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်အတွက် အဆင်သင့်ရှိနေပါသည်.
«ပုံမှန်ဝင်ငွေ»ရစေမည်ဟု တရားမ၀င်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုမျိုး မည်သည့်အချိန်ကမျှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အပြင် “ပိရမစ်ပုံစံလည်ပတ်သည့်”- အများနစ်နာစေမည့် အလိမ်အညာလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်သည့်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်များကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှုပေးပါ. FBSနှင့်ပက်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးရေးအဖွဲ့သို့ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးပါ.